Matio 16 - Ny Baiboly
Matio toko 16
Fangatahana famantarana - Ny lalivain'ny Farisiana - Ny naneken'i Piera an'i Jesoa - Ny fandavan-tena.
1Ary nanatona azy ny Farisiana sy ny Sadoseana haka fanahy azy, ka nangataka taminy mba hampiseho aminy famantarana avy any an-danitra. 2Namaly izy ka nilaza taminy hoe: Nony hariva ny andro, dia hoy hianareo: Ho tsara ny andro, fa mena ny lanitra; 3nony maraina indray: Ho ratsy ny andro, fa somary mena sy manjombona ny lanitra. 4Koa hainareo ny maminany amin'ny endriky ny lanitra, fa ny famantarana ny fotoana kosa tsy hainareo. Ity taranaka ratsy sy mpijangajanga ity dia mitady famantarana, fa tsy hisy famantarana hafa homena azy afa-tsy ny an'i Jonasa mpaminay ihany. Dia nilaozany teo ireo, ka lasa izy.
5Fa nony efa tafita ny rano izy ireo, dia hadinon'ny mpianatra ny nitondra mofo. 6Ary hoy Jesoa taminy: Tandremo fandrao azon'ny lalivain'ny Farisiana sy ny Sadoseana hianareo. 7Dia nieritreritra izy ireo ka nanao anakampo hoe: Noho isika tsy nitondra mofo izay. 8Ary hoy Jesoa nahalala izany ka nanao hoe: Ry kely finoana, nahoana hianareo no mihevitra anakampo, noho hianareo tsy nitondra mofo? 9Moa tsy mbola fantatrareo ihany, sa tsy tsaroanareo fa mofo dimy dia ampy olona dimy arivo, ary mbola firy harona no nangoninareo? 10Ary mofo fito dia ampy olona efatra arivo, sady mbola firy sobika koa no nangoninareo? 11Ahoana no tsy ahalalanareo fa tsy ny mofo no nantsoiko tamin'izaho nilaza taminareo hoe: Tandremo ny lalivain'ny Farisiana sy ny Sadoseana? 12Izay vao fantatr'izy ireo fa tsy ny lalivay amin'ny mofo no nasainy notandremana, fa ny fampianaran'ny Farisiana sy ny Sadoseana.
13Ary nony tonga tany amin'ny faritany atao hoe: Sezarean'i Filipo Jesoa, dia nanontany ny mpianany hoe: Ataon'ny olona ho iza moa ny Zanak'olona? 14Ary hoy ireo: Ny sasany manao hoe: Joany Batista, ny sasany Elia, ary ny sasany Jeremia, na ny anankiray amin'ny mpaminany. 15Dia hoy Jesoa taminy: Fa hianareo kosa, ataonareo ho iza aho? 16Namaly Simona Piera ka nanao hoe: Hianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. 17Dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: Sambatra hianao, ry Simona zanak'i Joany, fa tsy ny nofo aman-dra no nanambara izany taminao, fa ny Raiko izay any an-danitra. 18Ary izaho milaza aminao fa hianao no Piera (vato), ary eo ambonin'izany vatolampy izany no hanorenako ny Egliziko, ary ny vavahadin'ny afobe tsy haharesy azy. 19Homeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka izay rehetra hofehezinao etý an-tany dia ho voafehy koa any an-danitra, ary izay rehetra hovahanao etý an-tany dia ho voavaha koa any an-danitra. 20Ary tamin'izay, dia norarany ny mpianany mba tsy hilaza amin'ny olona fa izy no Kristy.
21Hatramin'izay vao noborahin'i Jesoa tamin'ny mpianany fa tsy maintsy ho any Jerosalema izy, ary ho ampijalian'ny loholona sy ny mpanora-dalàna mbamin'ny lohandohan'ny mpisorona, dia hovonoina, ary hitsangana amin'ny maty rahefa afaka hateloana. 22Ary naka azy hitanila kely Piera ka niteny azy mafy hoe: Sanatria, Tompo, raha hihatra aminao izany! 23Fa nihodina izy ka nilaza tamin'i Piera hoe: Mialà amiko, ry Satana! manafintohina ahy ity hianao, satria tsy mihevitra araka ny hevitr'Andriamanitra, fa araka ny an'ny olona.
24Ary tamin'izay Jesoa dia nilaza tamin'ny mpianany hoe: Raha misy ta-hanaraka ahy, aoka izy handà ny tenany, sy hitondra ny hazo fijaliany, ka hanaraka ahy. 25Fa izay ta-hamonjy ny ainy no hahavery azy, ary izay hahafoy azy noho ny amiko no hahazo azy. 26Inona no soa ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy, nefa very ny fanahiny? 27Fa ny Zanak'olona dia ho avy amin'ny voninahitry ny Rainy miaraka amin'ny anjeliny, ka amin'izay dia hamaly ny olona araka ny nataony izy. 28Lazaiko aminareo marina tokoa, fa ny sasany eto dia tsy hanandrana fahafatesana, raha tsy efa mahita ny Zanak'olona avy amin'ny fanjakany. >